धरानमा जो एमाले छाडेर एक्लै हिँडे::Hamro Koshi Awaj / awaz
धरानमा जो एमाले छाडेर एक्लै हिँडे
एक्लै भएपनि दगुर्छु भन्दै माधव नेपालको नेतृत्वको नेकपा एस रोज्ने उनी भन्छन्– धरानमा माधवका कार्यकर्ता धेरै छन्, १० औं महाधिवेशनपछि कार्यकर्ता यतै फर्किन्छन्ः कैलाश अग्रवाल (भिडियोसहित)
धरानः धरानमा एमाले छोडेर एक्लै भएपनि दर्गुछु भन्दै हिँडेका अग्रवाल अहिले उत्साहित नै छन् । नेकपा एमालेबाट धरान उपमहानगरपालिकाको नगर कार्यपालिका सदस्यमा निवार्चित अग्रवालले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) रोजेका छन् ।
धरानमा एमाले त्यागेर एकीकृत समाजवादी रोज्ने उनी एक्लो हुन् । उनले एकीकृत समाजवादीमा भएको सनाखत गरेका छन् । २०६६ सालमा नेकपा एमाले प्रवेश गरेका उनी पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनालकै कारण पार्टीमा गएको बताउँछन् । ‘म २०६६ सालमा एमालेमा लाग्दा खनालले नै मलाई उक्साउनुमात्रै भएन, उहाँबाटै प्रशिक्षित भएँँ’, उनी भन्छन्, ‘उहाँ नै एसमा भएकोले मैले पनि एमाले छोडिदिएँ ।’ २०४६ सालदेखि राप्रपा सम्हालेका उनले २०६६ सालमा राप्रपा पार्टी परित्याग गरेर एमालेमा गएका थिए । उनलाई २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनको बेला एमालेले कार्यपालिका सदस्यमा निवार्चित गरेको थियो ।
एमालेलाई धरानमा चुनाव जिताउन भौतिक, नैतिक साथै आर्थिक समेत सपोर्ट गर्दै आएका उनले एमाले छाडेकोमा कुनै पछुतो नभएको बताउँदै भने, ‘बरु एक्लै दगुर्छु तर केपी ओलीको प्रवृत्तिको सधैं विरोध गरिरहन्छु भनेर लागिरहें ।’
धरान साथै सुनसरीमै पनि एमालेमा तीब्र गुटउपगुट हुँदै तीब्र विवाद बढिरहेको छ । धरानमा पहिलाको माधव गुट र केपी ओली गुटले अहिले छुट्टाछुट्टै कमिटी गठन गरिसकेका छन् । यसले पनि धरानमा एमालेका विवाद छताछुल्ल भइसकेको उनी बताउँछन् । उनी धरानका चिनिएका व्यवसायीका रुपमा गनिन्छन् । समाजसेवामा पनि उनी उत्तिकै सक्रिय छन् । व्यवसायसँगै राजनीतिलाई पनि अघि बढाएका उनीसँग हाम्रो कोशी आवाज डटकमले गरेको छोटो कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
एक्लै हिँड्छु भनेर पनि लागिरहनुभएको छ ?
–हो, मलाई ओलीजीको प्रवृत्ति ठयाक्कै मन परिरहेको थिएन । साथीहरुसँग कुरा पनि गरें, यहीँ बसेर अन्तर सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने पनि कुरा आएको थियो । मैलेचाहिँ विचार गर्दा सधैंको किचलो किन सुनेर बसिरहने, बरु एक्लै भएपनि लड्छु, हिँड्छु भनेर धरान नगरभरीबाट एक्लै आँट गरेर लागें । फेसबुकमा धेरै कुरा आए– धरानमा माधव नेपालपक्ष बलियो भनिएपनि अन्ततः शुन्यमा पुग्ला जस्तो छ आदि इत्यादि । तर त्यसमा पनि कमेन्ट गर्थें, एक्लै हुँदैन । त्यसपछि म एक्लै भएपनि हिँड्छु भन्दै सनाखत गर्दै नेकपा एसमा लागें ।
धरानलगायत सुनसरीमा एमालेको तीब्र विवादलाई कसरी लिनुभएको छ ?
–यो पार्टीको आन्तरिक समस्या हो । त्यतिसारो महत्व पनि दिएको छैन । तर पनि त्यहाँ दुई धार छ । यो पहिला पनि थियो । एउटा संस्थापन पक्ष ओली र माधव पक्षधर भनाउँदाहरु छन् । दुईवटै धारमा धेरै असन्तुष्टि छ । यो असन्तुष्टि अहिलेको होइन पहिलादेखि नै हो । संस्थापनले सर्वोच्चको फैसलालाई त्यतिसारो मान्यता दिएको छैन । जेठ २ गतेअनुसार पार्टी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने त्यो पनि मान्यता नदिएको अवस्था देख्छु । यसैले गर्दा पनि फरक मत हुनेहरुको मत बाझिनु स्वभाविक हो ।
एमालेमा छुट्टाछुट्टै कमिटी पनि गठन भइसकेका छन्, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
–समानान्तर कमिटी गठन हुनु नै गलत हो । सर्वोच्चको फैसलालाई मान्नुपर्ने थियो । सर्वोच्चको फैसला मान्ने हो भने धरानमा पहिलाकै अध्यक्ष अहिले पनि अध्यक्ष हुनुपर्ने हो । तर फरक–फरक कमिटी गठन भएका छन् । मलाई विश्वास छ, जुन हेपिएका माधव पक्षकाहरु यही पार्टीमा आउँछन् ।
यसअघि त धरानमा माधव पक्षकै नेता, कार्यकर्ता बढी थिए भनिन्छ नि ?
–२०६६ मा पार्टी प्रवेश गर्दा झलनाथ खनाल अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । उहाँले नै मलाई एमालेमा ल्याउनुभएको हो । म एक्लै छैन, मसँग झलनाथ, माधव हुनुहुन्छ । धरानमा माधव पक्षकाहरु जति पनि छन् उनीहरुसँगै मैले काम गरेको छु । अहिले पनि उहाँहरुले मलाई निकट नै सम्झिन्छन् र म पनि उहाँहरुलाई भित्रैदेखि निकट सम्झिन्छु । मलाई विश्वास छ, मंसिर १० देखि १२ गतेसम्म हुने महाधिवेशनपछि उहाँहरु सबै यसैमा आउँछन् ।
अधिवेशनमा माधव पक्ष भनाउँदाहरुले उचित पद पाउँदैनन्, पद नपाएपछि असन्तुष्ट हुन्छन्, त्यसपछि आफ्नो ठाउँमा नै जानुपर्छ भनेर सोच्छन् ।
अहिले धरानमा नेकपा एसको अवस्था कस्तो छ ?
–अहिले सांगठनिक हिसाबमा कमजोर छ । मलगायत ८–१० जना साथीहरु खुलेका छन् । दिनप्रतिदिन यसको संख्या बढ्दै जान्छ भन्ने विश्वास छ ।
नेकपा एसमा ल्याउन तपाईको पहलचाहिँ के छ ?
–मैले केही पहल गर्नैपर्दैन । जब आत्मामा चोट पर्छ नि उनीहरु आफै आउँछन् । कसैले भनेर हुँदैन, म पनि भनेर, सल्लाह लिएर यहाँ आएको होइन । सबैले खाली समयमा आत्मालोचना गर्दै यो कुराको मनन गर्नुपर्छ कि–ओलीको हेपाइ सहेर बसिरहने ।
आउने इच्छा धेरैको छ, धेरै खुलिसकेकै छैनन् । समूहमै जाउँ भन्ने धेरैको मानसिकता राखेर खुलिसकेका छैनन् । एक्लाएक्लै भए त धेरै साथीहरु यहाँ आइसक्थे । पुराना र चिनिएका साथीहरु माधव पक्षमै छन् । संस्थापन पक्षमा नयाँ नयाँ सदस्यहरु धेरै छन् ।
पार्टीचाहिँ कसले बिगारेको जस्तो लाग्छ ?
–पार्टी यस्तो अवस्थामा पुग्नुमा ओलीको काम गराइ नै हो । एकल निर्णय गर्ने, संविधान नै नमान्नु उनको कमजोरी हो । यस्तै, ९ औं महाधिवेशनमा जसले ओलीलाई जिताएर यो अवस्थामा पुरयाए त्यही कारण पनि पार्टी बिग्रियो ।
–असली साथीहरुलाई अनुरोध गर्दछु कि म अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीमा गएको छु । समूहलाई पनि नहेर्नुहोस्, आत्मसम्मानको रक्षा गर्न एस पार्टीमा आएर बलियो बनाएर राजनीतिमा अगाडि बढौं भनेर भन्दछु ।